Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeeyey arimaha Soomaaliya
HS:-Wararkii ugu danbeeyey arimaha Soomaaliya
HS:-Xukumada cusub ee Soomaaliya oo maalmahan waday dadaalo xoogan oo iskugu jiray arimaha dibada kadib markii ay dhawaantaan safaro is xig xiga dalka dibadiisa ku tageen madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka tiran golaha wasiirada oo u kala amba baxay gudaha wadanka iyo dibada.
Marka xaalada dalka Soomaaliya dhinacyo badan laga eego waxaa siweyn looga dareremayaa dadaalo ay wadaan masuuliyiinta cusub kuwaasi oo iskugu jira wax ka qabashada arimaha amaanka, xoreynta gobolada iyo waliba siyaasada dibada.
Sida warar sugan lagu helayo magaalada Mogdishu ayaa lagu wadaa iney ka mid noqon doonto magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan dunidan aynu ku nool nahay mudo aan la cayim laakinse loo maleynayo dhawrka sano ee ugu horeysa ee xukumadan cusub kadib markii dhismooyin casri ah in laga fuliyo ay wada saxiixdeen xukumada cusub iyo dowlada Turkiga. sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal dheeraad ah muujiyey una muuqda hada mid la jaanqaadayo xukumadaan cusub siiba gudpoomiyaha gobolka Banaadir inkastoo ay wali degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood ay gudoomiyaal ka yahiin rag si weyn ugu xiran kooxda Shabaab kuwaasi oo caqabad wali ku ah geedi socodka nabada la doonayo in laga islaaxiyo dalka Soomaaliya oo mudo ku soo jiray fowdo.
Dhinaca kale waxaa ka socda gudaha wadanka qorshe balaaran oo dalka dhan looga sifeynayo kooxda Al Shabaab iyadoona dagaaladii ugu danbeeyey kooxda looga i taal roonaaday kadib markii ay farahooda ka baxday magaalooyinka Jowhar, Buurane iyo Mahadaay iyagoona hada badankood ku sugan tuuladii uu ku dhashay madaxweynahii waqtigiisa dhamaaday ee looga guuleytay doorashada Shiikh Shariif, tuuladaasi oo lagu magacaabo Miirtuugo.
Dhinacaas iyo Hiiraan waxey kaka sugan yahiin ilaa dhawr degmo oo waaweyn sida Buulo Burde, Jalalaqsi, Buq Aqable, Halgan, Maxaas, Moqokori ilaa meel u muuqata magaalada B/weyne oo la yiraado tuulada Baardheere oo ay siweyn u maamulaan.
Marka laga soo tago qorshaha ay xukumada cusub wax kaka qabaneyso xaalada guud ee Soomaaliya hadey noqon laheyd arimaha gudaha oo ay ugu horeyso nabadgalyada iyo waliba siyaasada dibada hadane waxaad moodaa in ciidamada dowlada ay wax badan ka duwan yahiin xiligii ay joogeen labada Shariif oo marka ay doonayaan ciidamadu iney dagaal qaadaan idaacadaha ay ka sii sheegi jireen waqtiga iyo maalinta la qaadayo maadaama ay dowladaas dhianc kala shaqeyneysay Al Shabaab oo aysan xiligaas masuuliyiintii jirtay diyaar u aheyn iney wadanka ka saaraan.
Sikasta oo ay ahaataba dowladan waxey noqon doontaa midii ugu horeysay ee beesha caalamka iyo dowlado saaxiibo dhaw la ah Soomaaliya ugu deeqaan dhaqaalahii ugu badnaa ebed, dhaqaalahaas oo intooda badan si toos ah loo siin doono horaanta sanadka cusub ee 2013-ka sida ilo muhiim ah laga soo xigtay.
Inkasta oo ay kooxda Shabaab wali degaano badan oo ka tirsan dhulweynaha Hiiraan maamulaan hadane siweyn ayaa awoodooda loo wiiqay magacoodana waxuu ku eg yahay inba la maqlo mar danbe marka lagala wareego magaalada Bulo Burde oo ah halka ay hada ka helaan dhaqaalaha ugu badan maadaama ay dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee ku sugan halkaas dhaqaalo xoogan o baad ah ka qaadaan.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha Soomaaliya
· admin on December 10 2012 03:10:14 · 0 Comments · 2404 Reads ·
14,667,450 unique visits